खाडीमा प्रेमको नाममा ठगी-कसरी फस्छन सोझा युवती ? - Ek Jamarko
Home / विदेश / खाडीमा प्रेमको नाममा ठगी-कसरी फस्छन सोझा युवती ?
खाडीमा प्रेमको नाममा ठगी-कसरी फस्छन सोझा युवती ?
कहानी १: झापा स्थाई घर भएका सुर्य किरण ढकाल, युएईमा काम गर्छन । उनको तलवमान लगायत सुविधा राम्रै छ । कम्पनिले दिएको सुविधा अन्तर्गतको गाडी चलाउछन । गाडीमा नेपाली पापगीत बजाएर फेसबुक लाईभ गर्नु उनको शौख हो । बाहीरी आवरण र जिउडाल आकर्षक र हेन्सम भएको कारण प्राय: युवती हरु मख्ख परेर उनको नजिक हुन चाहन्छन । सुरुवाती मित्रतामा अत्यन्तै मिठो बोल्ने सुर्य किरण निकै हेपाहा प्रवृत्तीका मान्छे हुन । तर सुरुवाती बोलीचालीको मिठासका कारण उनि खराव आचरणका मान्छे हुन भन्ने कुरा उनीसंग संगत गरेका युवती हरुले धेरै ढिलो मात्र थाह पाउछन ।
युएईमा विगत एक वर्ष भित्र उनले चार जना गर्लफ्रेण्ड बनाए । चारै जना संग उनको शारीरीक सम्पर्क समेत भयो । केही युवती संगका आन्तरीक तश्विर हरु समेत खिचेर उनले आफ्ना साथी हरु संग सेयर गरे । त्यो तश्विरले उनको जिवनमा कुनै नकारात्मक अवस्था सृजना गरेन तर तश्विरमा भएका युवती हरुको दैनिकी भने तहस नहस भयो । अहिले दुबईमा सार्वजानिक कार्यक्रम हरुमा उपस्थित हुनै नसक्ने गरि बदनाम भएका छन् ति युवती हरु । मोबाइलमा थरि थरिका फोहोरा म्यासेज हरु आउछन र फोन कलमा सेक्सका प्रस्ताव हरु आएर हैरान बनेका छन ।
केही दिन अगाडी सूर्यकिरणको जन्मदिन थियो । जन्मदिनको उपहार भनेर एकजना गर्लफ्रेण्ड लाई ल्यापटप किन्न लगाए । अर्की लाई आईफोन किन्न लगाए । तेश्री गर्लफ्रेण्डको गलाको सुनको सिक्री निकालेर लगाएर चौथी गर्लफ्रेण्ड संग वियर पिएर जन्मदिन मनाए ढकालले ।
जन्मदिन सेलिब्रेसन अगाडी घरमा समस्या परेको भन्दै नानु ‘तिम्रो ससुरा बा लाई’ पचास हजार आवस्यक पर्यो रे ! ईमर्जेन्सी ! भन्दै चौथी गर्लफ्रेण्ड लाई आफ्नो बाबुको नाममा पचास हजार डिपोजीट गर्न लगाए । तिम्रो पैसा के मेरो पैसा के उस्तै हो सानु ल पठाईहाल त हिसाव पछी मिलाउँला भनेर हतार हतार अनुरोध गरेका ब्वाईफ्रेन्ड लाइ टार्न सकिनन् सरिताले । जन्मदिन पछी उनीहरुको सम्पर्क पातलिंदै गयो । अहिले फोन गर्दा ढकालले अपशब्द बोल्छन हेप्छन अनि बजारु भएको आरोप समेत लगाउछन । यस्तै धोकाले बिक्षिप्त बनेकी छन् सरिता ।
अहिले उनि पाँचौं युवती संग रिलेशनमा छन् । अचानक उनकी नयाँ गर्लफ्रेण्डले उनी विवाहित भएको थाह पाईछन । अनि विवाहित हुदाहुदै आफुलाई फसाएको, धोका दिएको र पैसा समेत खर्च गराएको भनेर दोष लगाएपछी सुर्यकीरणले आफ्नी श्रीमती संग आफ्नो संबन्ध राम्रो नभएको र डिभोर्सको तयारी भईरहेको भनेर कन्भिन्स गरेछन । हालांकी उनको श्रीमती सम्पुर्ण रुपमा गृहीणी हुन । सासु ससुराको सेवा गरेर र छोरो स्याहारेर दिन विताएकी उनकी श्रीमती संग संबन्ध विग्रने कुनै सम्भावना सम्म छैन ।
पछील्लो पटक ढकालको बल्छीमा परेकी पैसा राम्रो कमाउने गर्लफ्रेण्ड लाई विहे गर्ने आश्वासन दिएर रिलेशनसिपमा बसेका उनले पुराना गर्लफ्रेण्ड छाड्ने लगायत श्रीमती संग समेत छोडपत्र गर्ने बाचा समेत गरेका छन् ।
नयाँ गर्लफ्रेन्ड संग नयाँ बाचा गर्दा नगर्दै उनकी पुरानी गर्लफ्रेण्ड पवित्रा सुबेदी जसको ढकालले पहिल्यै पचास हजार उम्काई सकेका थिए उनीसंग पुनः भेटघाट भएछ । पवित्रा एक छोराकी आमा समेत थिईन उनलाई समेत ढकालले तिम्रो एकजना छोरा मेरो एकजना छोरा, तिमी बुडो संग अलग भएकी, म श्रिमती संग अलग हुन चाहेको मान्छे, हाम्रो सबैकुरा मिल्छ हामी लिभिङ् रिलेशनमा बसौं भनेर कन्भिन्स गरेछन । छोरा समेत स्वीकार्छु भनेर बाचा गरेपछि पवित्रा मख्ख परेर फेरी ढकाल लाइ सुनको बेरुवा औंठी बनाएर गिफ्ट दीइछन् । अहिले ढकाल त्यो औंठी टल्काएर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्छन तर पवित्रा संग उनको खासै भेटघाट बोलचाल छैन ।
लगभग चार जना गर्लफ्रेण्डको औशतमा दुई दुई लाख जनही ठगेर उनी अहिले पाँचौं गर्लफ्रेण्ड संग दुबईमा बस्दै आएका छन । अहिलेकी गर्लफ्रेण्ड पनि राम्रै कमाउछीन । घुमघाम गीफ्ट आदान प्रदान राम्रै संग चलिएरहेको छ । कतिदिन त्यो सम्बन्ध टिक्छ यसै भन्न सकींदैन । यति हुँदाहुदै पनि उनको घरमा श्रीमती संगको सम्बन्ध समेत सुमधुर नै छ ।
कहानी २: पाल्पा घर भई हाल अवुधावीमा कार्यरत सानु परियार कलाकार हुन । नेपालमा रहदा दोहोरी रेष्टुरेण्टमा गीत गाउने गर्थीन । अचानक उनलाई विदेश जाने भुत सवार भयो र उनी अवुधावि पुगीन । अहिले एउटा सेक्युरिटी कम्पनिमा काम गर्छीन । तलव सुविधा राम्रै छ ठिकै पैसा कमाउछीन । अझैपनि सानु परियार कलाकारीता भनेपछी हुरुक्कै हुन्छीन ।
अवुधावी पुगेपछी उनको संगत एकजना दुईचार वटा गीत गाईसकेको कलाकार संग भयो । प्रेमकुमार सारु हुन उनी । राम्रो गीत गाउछन । सानु परियार उनलाई देखेपछी र उनले गीत गाएको सुनेपछी एकोहोरो लठ्ठ पर्छीन । उनीहरुको प्रेम पनि झांङ्गिदो अवस्था पार गरेर फस्टाउदो चरणमा छ ।
दोष्ती बढ्दै गयो । प्रेमकुमार विवाहित हुन । उनका छोराछोरी समेत छन । सानु परियार पनि विबाहीत हुन तर कारणवस उनको घरबार जम्न सकेन । अहिले उनले कमाएको तलव महिनावारी खुरुखुरु प्रेमकुमार लाई बुझाउछीन । प्रेमकुमार सानुको लागी स्टेजमा गीत गाउने बातावरण बनाउछन र संगै गीत गाउने गर्छन । एकादुई दोहोरी गीत समेत रेकर्ड गराए सारुले । सानु त्यत्तीमै मख्ख हुन्छीन र प्रेम कुमार संगको सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै आफुले कमाएको सबै उसैलाई बुझाउछीन ।
यता प्रेमकुमार को दाउ अर्कै हो । एक त जात मिल्दैन भनेर अन्तिममा उम्कने बाटो छदै छ नि भनेर ढुक्क छन् सारु । अबुधावी बसुन्जेल्को लागि श्रीमतीको कमि पनि महसुस नहुने । गर्लफ्रेन्डको कमैमा एकलौटी कब्जा पनि गर्न पाइने उनको दुवै हातमा लड्डु परेको छ यसबेला ।
कहानी ३: नवलपरासी तिरकी एकजना युवती, उनको नाम सरस्वती चौधरी हो । उनको जन्मथर अर्याल हो । पहाडीया अर्यालकी छोरी । परिस्थीतीले उनलाई चौधरी बनायो । छिमेकको चौधरी केटो हेन्सम लाग्ने । आफन्तको आँखा छलेर एकदिन उनले भागेर लगनगाँठो कसीन ।
लगन गाँठोले मात्र संसार नचल्ने । चौधरी पर्यो अल्छीको पोको । जे भएपनि केही त गर्नै पर्यो भनेर उनले चौधरिकै नामथरमा पासपोर्ट बनाईन सरस्वती चौधरी ।
कान्तिपुर पत्रीकामा छापिएका विज्ञापन पच्छ्याएर मेनपावर धाईन, अन्तरवार्ता दिईन । पास भएर सारजहाँको लागी उडीन सरस्वती । पेट्रोल स्टेसनको काम । कमाई राम्रै हुने । छिट्टै जिवन फेरीने आशामा मेहनत गर्दै गरिन ।
समय वित्दै गयो । पेट्रोलपम्पमा संगै काम गर्ने सेक्युरिटी गार्ड उनलाई मन पर्दै आयो । उनी पाल्पाली बाहुनी । नवलपरासीको थारु संग पोईल गएकी । अहिले दांगको थारुले मन जित्दै आयो । नवलपरासीको थारु संगका याद हरु पातलिंदै गए । अचेल अर्जेल्नी नानीको तलव दाङ्गको थारु भाईले बुझ्छन । उनिहरुको प्रेम झांगीएको छ लहरे वेली झैं पहेलपुर भएर । तर चौधरीको नियत ति बाहुनी संग जिन्दगि बिताउने हुदै होईन । बसुन्जेलको रमाइलो र अतिरिक्त आम्दानीको लागि उनले सरस्वतीलाई मुर्गा बनाइरहेछन् ।
कहानी ४: ईजरायलमा कार्यरत छन पुष्पलता (नाम परिवर्तन) । उनी छयालिस वर्षिय महिला हुन । विगत दश वर्ष देखी उनी ईजरायलमै जागीर गर्छीन । ईजरायलको कामले उनलाई मान सम्मान र सम्पत्ती सबैथोक दिएको छ । एउटा छोराको रेखदेख घरमा श्रिमानले गरिरहेका छन । छोरी नर्सिङ पढाई सकेर विदेशमै सेटल्ड छन । पुष्पलताको जिवनको स्वर्णीम युग सुरु भएको छ । अवका केही महिना पछी ईजरायल नफर्कने गरि नेपाल आएर रिटायर्ड लाईफ विताउने योजनामा छन उनी ।
तर पुष्पलताको लागी पनि परिस्थीती क्रुर बनेर निस्कीयो । ईजरायलको एक्लोपन र त्यो एकान्त अवस्थाको न्याश्रो मेट्न उनले सामाजीक संजालमा साथी बनाईन । कास्की तिरका एकजना युवा उनको डिजीटल जिन्दगीमा मायालु बनेर उदाए ।
हरेक मिनेट केयर गर्ने । हरेक समयको खवर राख्ने । सन्चो विसन्चो सोधीरहने । खाना खाएको नखाएको देखी लुगाफाटो सम्मको सोधी खोजी गरिरहने आफुभन्दा झण्डै दश वर्ष कान्छा कस्केली भाई संग पुष्पलताको प्रेम झांगीदै गयो ।
ईजरायलको सस्तो वाईन र डिजीटल प्रेमको नसा मिसींदै गयो । भिडीयो कल हरुमा पुष्पलताका अन्तरवस्त्र हरुले स्थान छाड्दै गए । उता कस्केली भाई रेकर्ड गर्दै गयो ।
भर्चुअल फ्रेन्डशीपमा दुबैजनाले धेरै रमाइलो गरे । पुष्पलता बिदामा नेपाल आईन उनीहरुले भेटघाट गरे । रिसोर्टको रुममा आफ्नो रात रंगीन बनाए ।
प्रेम त थियो । तर दुवै तर्फबाट गरिएको प्रेममा केवल यौटा स्वार्थ थियो । केवल शारीरीक आवस्यकता बाहेक पुष्पा केही चाहदैन थिईन । तर कस्केली भाई घाती भएर निस्कीयो । रिसोर्टका रंगीन पलका केही फोटा अनी भिडीयो च्याटका केही स्न्यापसर्ट लिएर राखेको कस्केलीले हिजो आज ति फोटा सार्वजानीक गर्ने धम्की दिंदै पुष्पलता संग समय समयमा केही न केही रकम असुल्छ । नदिउँ बदनाम हुने डर दिउँ मेहनत गरेर कमाएको पसिनाको कमाई ! पुष्पलता गम्भीर धोकाको कारण डिप्रेसनमा परेकी छन अचेल ।
माथी वर्णन गरिएका चारवटै कहानीमा महिला हरु पिडीत नै हुन । जतिसुकै विस्वास गरेर बनाएको साथी पनि घाती बनेर निस्कदा पाएको धोका र पिडा उनीहरु कतै एक्सप्रेस गर्न पनि सक्दैनन र पिडक लाई कानुनी दायरामा ल्याउनपनि सक्दैनन । दुख गरेर कमाएको सम्पत्ती र सरिरको सर्वस्व सुम्पिएपनि ति धोकेवाज हरु सुध्रीने या पुराना कुरा विर्षने सोचमा रहेका हुँदैनन । जवसम्म कुनै न कुनै रुपमा फाईदा भईरहन्छ ति घाती हरु झम्टीरहन्छन र पिडित युवती हरुलाइ तर्साई रहन्छन ।
अन्त्यमा ति केटा हरु आफ्नो वास्तविक जिवनमा जस्ताको तस्तै बनेर फर्कन्छन । यी तमाम घटना हरुले पुरुषको जिन्दगीमा खासै नकारात्मक असर पारेको देखिदैन तर महिला हरु लाई सँधैको पिडीत बनाउछन । यसरि अनैतिक सम्बन्ध बनाउने हरुले एक न एक दिन युवतीलाई अवश्य धोका दिन्छन त्यो कुरा उक्त सम्बन्धलाई बाहिर बाट नियाल्ने हरुले बुझीरहेका हुन्छन तर त्यो प्रेम या त्यो सम्बन्धलाइ ईमान्दारी पुर्वाक बहन गर्न लागि परेका युवती हरुले आफुले धोका पाईरहेको कुरा समयमै बुझ्न सक्दैनन र अन्त्यमा नराम्रो संग पिडित बन्न पुग्छन ।
उनिहरु प्रेममा यस्तो किसीमले फसेका हुन्छनकी त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु उनीहरुको लागी असम्भव जस्तै हुन्छ । विभिन्न सपना देखेर सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्न थालीसकेको मान्छे लाइ उसले गरेको प्रेम कपट पूर्ण ढोका हो भनेर बिश्वाश दिलाउन सकिदैन रहेछ । त्यसरी प्रेममा परेकी युवतीले कसैको कुरा पत्याइहाल्ने अवस्था पनि नहुने रहेछ । तर जव आफुसंग आफुले माया गरेको प्रेमी पनि ईमान्दार नरहेको र साथमा मेहनत गरेर कमाएको पैसा समेत नरहेको कुरा बुझ्छन तव समय धेरै घर्कीसकेको हुन्छ ।
गोपनियताको कारण माथि उल्येखित घटना हरुमा संलग्न भएका पात्र हरुको नाम र स्थान परिवर्तन गरिएको छ । (पात्र र स्थान काल्पनिक हुन्) । उल्ल्येखित मध्ये दुइ वटा घटना संग सम्बन्धित नग्न र अर्धनग्न तश्विर हरु हामी संग सुरक्षित् रहेका छन् ।
खाडीमा प्रेमको नाममा ठगी-कसरी फस्छन सोझा युवती ? Reviewed by Durga Pangeni on मार्च 05, 2019 Rating: 5